Facebook ပေါ်မှာ ချက်ချင်း Unfriend အလုပ်ခံရစေနိုင်သည့် Post များ – Gentleman Magazine
နည်းပညာတွေတိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ Facebook, Twitter, Instagram စတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီထဲကမှ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထက် Facebook ကို သုံးစွဲသူတွေက အများစုဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ ပုံတွေ စာတွေစတဲ့ post တွေတင်တာကလည်း ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခု မဟုတ်သလို ဘာတွေတင်သင့်တယ် ဘာတွေကိုတော့ မတင်သင့်ဘူး စတဲ့ တိကျသေချာတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်း ရှိမနေပါဘူး။ ဒီတော့ Facebook အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ မိမိစိတ်တိုင်းကျ တင်ချင်သလိုတင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။
တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် Facebook အသုံးပြုရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က မိတ်ဆွေဟောင်း မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ အမြဲမပြတ်အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook ကို အသုံးပြုရင်း၊ post တွေတင်နေရင်းကပဲ online ပေါ်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေသာမက အပြင်လောကက တကယ်သူငယ်ချင်းအစစ်တွေကပါ သင့်ကို စိတ်ပျက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ Facebook ပေါ်မှာ လူတွေတစ်ယေညက်နဲ့တစ်ယောက် Unfriend လုပ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း (၃)ခု ရှိပါတယ်။
၁။ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစွန်းရောက်လွန်းတဲ့ post တွေ တင်ခြင်း၊ share ခြင်း
၂။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ လိင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကြားဝံ့မနာသာ အများနဲ့ဆီလျော်မှုမရှိတဲ့ post တွေခြင်း၊ share ခြင်း
၃။ အနှစ်သာရမရှိသော post များတင်ခြင်း၊ share ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းရင်း သုံးခုမှာ ပထမနှစ်ခုက သိပ်အများကြီးစဉ်းစားစရာမလိုပဲ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံပါတ် ၃ အကြောင်းရင်းကတော့ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးပြီး မေးစရာရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကို အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါလဲ???
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာက အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး ဘယ်အကြောင်းအရာက အနှစ်သာရမရှိတဲ့ တစ်ရာဖိုးသုံးပုဒ်တန် အပေါစားဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဘယ်သူကမှသေချာမသိနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် post တစ်ခုဟာ တစ်ချို့လူတွေအတွက် အသစ်ဖြစ်နေပေမယိ့ တစ်ချို့တွေအတွက်တော့ ဖန်တစ်ရာတေ အပ်ကြောင်းထပ် ကြားဖူးနေတဲ့ ငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်နေတတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့် account ထဲက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်အောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလား။
တကယ်တော့ အားလုံးကို စိတ်ကျေနပ်စေမယ့်အရာဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေရတာကိုက ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Facebook ပေါ်က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေထဲမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ post တစ်ခုတင်လိုက်တာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေက ထင်မှတ်မထားနိုင်လောက်အောင် အမျိုးအစုကွဲပြားနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းအပြင်လောကမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ အပြင်လောကမှာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာ လူနည်းစုဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု၊ ၀ါသနာစတဲ့ ခံစားမှုချင်းတူရာလူတွေ စုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အငြင်းပွားစရာ၊ အမြင်ကတ်စရာဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရည်းစားဟောင်းတွေ၊ ကြိတ်ကြွေနေရသူတွေ၊ သာမန်အသိမိတ်ဆွေနဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘဘိုးဘွားနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတောင် ပါနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ အုပ်စုတစ်ခုချင်းဆီမှာလည်း သင့်ရဲ့အပြုအမူ၊ သင်ရေးသားဝေမျှတဲ့အကြောင်းအရာ၊ တင်လိုက်တဲ့ post တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်တင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကို အားလုံးကလက်ခံနိုင်ဖို့ထက် အုပ်စုတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် စိတ်ပျက်စရာ အမြင်ကတ်စရာဖြစ်သွားနိုင်ချေက ပိုများပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Facebook ပေါ်မှာ post တွေ status တွေတင်တဲ့အခါ လူအမြင်ကတ်စရာများပြီး ချက်ချင်း Unfriend အလုပ်ခံရစေနိုင်တဲ့ post အမျိုးအစား (၃)ခုကို မတင်မိအောင် သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိ မရေရာသည့် Status များ
ဒီ Status တွေကတော့ များသောအားဖြင့် ခပ်တိုတိုဖြစ်တတ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မပါဝင်သော်လည်း သဲလွန်စလိုလို၊ စကားအစလိုလို အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် “ဒီနေ့ကတော့ အပျော်ဆုံးနေ့ပဲ”၊ “တကယ်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်”၊ “ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး”၊ “ကျွန်တော်/ကျွန်မအတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ” စတဲ့ Status တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Status တွေရဲ့ လိုရင်းကတော့ ဖတ်မိသူကို သဲလွန်စချပေးပြီး “ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ”စတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာစေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Status မျိုးက တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး သူများကိစ္စ စိတ်မ၀င်စားသူတိုင်းက ဒီလို သဲလွန်စပေးတဲ့ Status တွေကို လိုက်ပြီး ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ လိုက်စပ်စုနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ဟန်လုပ်ကြွားလုံးထုတ်သည့် Status များ
“i Phone7နဲ့ Samsung Galaxy S 8 ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ ပြောကြပါဦး။ ရွေးရခက်နေလို့” ဆိုတဲ့ Status မျိုးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တကယ်ရွေးရခက်နေတာမျိုးမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ “ကော်ဖီဆိုင်မှာ မထင်မှတ်ပဲတွေ့လို့ စကားပြောနေတာ အတော်ကြာသွားတယ်။ အလုပ်နောက်ကျနေပြီ”
ဒီလို Status မျိုးတွေက ဖတ်မိသူရဲ့ attention ကို ရယူချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Status တင်တဲ့သူအနေနဲ့ သူ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကို အမှတ်မထင်ဖြစ်ရပ်လိုလို တင်ထားပေမယ့် Log in ၀င်ရမယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်၊ location check in ၀င်တာတွေ စသဖြင့် အများကြီးပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဟန်လုပ် ကြွားလုံးထုတ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိမ်ချသလိုနဲ့ တဖက်လူတွေထက် သာကြောင်း ဖော်ပြချင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Unfriend လုပ်မယ့် သတိပေးချက် Status များ
Facebook ပေါ်မှာ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်ကို အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Unfriend လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်သာလုပ်လိုက်ပါ။ ဘာ သတိပေးတဲ့ Status မှ တင်စရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လက်တွေ့လောကမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဖြစ်က ပြတ်ဆဲတဲ့အခါမှာ ဘာကြေညာချက်မှ ထုတ်မနေပဲ ဒီအတိုင်းပြီးသွားတတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook လိုမျိုး ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ Unfriend လုပ်တာကလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတည်း Unfriend မလုပ်ပဲ ချိန်းခြောက်မှုတွေ လုပ်နေတာက အမူအကျင့်မရှိပဲ ရိုင်းစိုင်းရာ ရောက်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အားကျရစေမည့်
Facebook ပျေါမှာ ခကျြခငျြး Unfriend အလုပျခံရစနေိုငျသညျ့ Post မြား
နညျးပညာတှတေိုးတကျထှနျးကားလာတဲ့ ယနခေ့တျေမှာ Facebook, Twitter, Instagram စတဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေလညျး ကြှနျတျောတို့ နစေ့ဉျဘ၀ရဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဒီထဲကမှ မွနျမာနိုငျငံမှာဆိုရငျ အခွားဆိုရှယျမီဒီယာတှထေကျ Facebook ကို သုံးစှဲသူတှကေ အမြားစုဖွဈပါတယျ။ Facebook ပျေါမှာ ပုံတှေ စာတှစေတဲ့ post တှတေငျတာကလညျး ခကျခဲတဲ့အလုပျတဈခု မဟုတျသလို ဘာတှတေငျသငျ့တယျ ဘာတှကေိုတော့ မတငျသငျ့ဘူး စတဲ့ တိကသြခြောတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှလေညျး ရှိမနပေါဘူး။ ဒီတော့ Facebook အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့ မိမိစိတျတိုငျးကြ တငျခငျြသလိုတငျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးရှိနပေါတယျ။
တကယျတမျးစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျ Facebook အသုံးပွုရခွငျးရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြက မိတျဆှဟေောငျး မိတျဆှသေဈတှနေဲ့ အမွဲမပွတျအဆကျအသှယျရှိနဖေို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Facebook ကို အသုံးပွုရငျး၊ post တှတေငျနရေငျးကပဲ online ပျေါက မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှသောမက အပွငျလောကက တကယျသူငယျခငျြးအစဈတှကေပါ သငျ့ကို စိတျပကျြသှားတာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ Facebook ပျေါမှာ လူတှတေဈယညေကျနဲ့တဈယောကျ Unfriend လုပျရတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျး (၃)ခု ရှိပါတယျ။
၁။ နိုငျငံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး အစှနျးရောကျလှနျးတဲ့ post တှေ တငျခွငျး၊ share ခွငျး
၂။ လူမြိုးရေးခှဲခွားမှု၊ လိငျမှုကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မကွားဝံ့မနာသာ အမြားနဲ့ဆီလြျောမှုမရှိတဲ့ post တှခွေငျး၊ share ခွငျး
၃။ အနှဈသာရမရှိသော post မြားတငျခွငျး၊ share ခွငျး စတဲ့ အကွောငျးရငျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျးရငျး သုံးခုမှာ ပထမနှဈခုက သိပျအမြားကွီးစဉျးစားစရာမလိုပဲ သိသာထငျရှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နံပါတျ ၃ အကွောငျးရငျးကတော့ နညျးနညျးရှုပျထှေးပွီး မေးစရာရှိပါတယျ။ ဘယျလိုအကွောငျးအရာမြိုးကို အနှဈသာရမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါလဲ???
ဘယျလိုအကွောငျးအရာက အနှဈသာရပွညျ့ဝပွီး ဘယျအကွောငျးအရာက အနှဈသာရမရှိတဲ့ တဈရာဖိုးသုံးပုဒျတနျ အပေါစားဖွဈမလဲဆိုတာကို ဘယျသူကမှသခြောမသိနိုငျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ post တဈခုဟာ တဈခြို့လူတှအေတှကျ အသဈဖွဈနပေမေယိ့ တဈခြို့တှအေတှကျတော့ ဖနျတဈရာတေ အပျကွောငျးထပျ ကွားဖူးနတေဲ့ ငွီးငှစေ့ရာ ဖွဈနတေတျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမှာ သငျ့ account ထဲက မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ အားလုံး စိတျတိုငျးကြ ကနြေပျအောငျ လုပျနိုငျပါ့မလား။
တကယျတော့ အားလုံးကို စိတျကနြေပျစမေယျ့အရာဖွဈဖို့ ကွိုးစားနရေတာကိုက ပွဿနာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Facebook ပျေါက သူငယျခငျြးမိတျဆှထေဲမှာ လူအမြိုးမြိုး စိတျအထှထှေဖွေဈနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ Facebook ပျေါမှာ post တဈခုတငျလိုကျတာနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေ ထငျမှတျမထားနိုငျလောကျအောငျ အမြိုးအစုကှဲပွားနလေရှေိ့ပါတယျ။ ဒီအတိုငျးအပွငျလောကမှာ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ အပွငျလောကမှာ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေေ တှဆေုံ့ကွတဲ့အခါမှာ လူနညျးစုဖွဈပွီး စိတျဝငျစားမှု၊ ဝါသနာစတဲ့ ခံစားမှုခငျြးတူရာလူတှေ စုကွတာဖွဈတဲ့အတှကျ အငွငျးပှားစရာ၊ အမွငျကတျစရာဖွဈနိုငျခြေ နညျးပါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါက မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှထေဲမှာတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ရညျးစားဟောငျးတှေ၊ ကွိတျကွှနေရေသူတှေ၊ သာမနျအသိမိတျဆှနေဲ့ အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြးတှေ၊ မိဘဘိုးဘှားနဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှတေောငျ ပါနနေိုငျပါသေးတယျ။ ဒီလိုကှဲပွားခွားနားနတေဲ့ အုပျစုတဈခုခငျြးဆီမှာလညျး သငျ့ရဲ့အပွုအမူ၊ သငျရေးသားဝေမြှတဲ့အကွောငျးအရာ၊ တငျလိုကျတဲ့ post တှနေဲ့ပတျသကျပွီး မတူကှဲပွားတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှရှေိနပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျတငျလိုကျတဲ့ post တဈခုကို အားလုံးကလကျခံနိုငျဖို့ထကျ အုပျစုတဈခုမဟုတျ တဈခု ဒါမှမဟုတျ တဈဦးတဈယောကျအတှကျ စိတျပကျြစရာ အမွငျကတျစရာဖွဈသှားနိုငျခကြေ ပိုမြားပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ Facebook ပျေါမှာ post တှေ status တှတေငျတဲ့အခါ လူအမွငျကတျစရာမြားပွီး ခကျြခငျြး Unfriend အလုပျခံရစနေိုငျတဲ့ post အမြိုးအစား (၃)ခုကို မတငျမိအောငျ သတိပွုရှောငျရှားနိုငျစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ဘာကိုဆိုလိုမှနျးမသိ မရရောသညျ့ Status မြား
ဒီ Status တှကေတော့ မြားသောအားဖွငျ့ ခပျတိုတိုဖွဈတတျပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျမြား မပါဝငျသျောလညျး သဲလှနျစလိုလို၊ စကားအစလိုလို အကွောငျးအရာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဥပမာ ပွောရရငျ “ဒီနကေ့တော့ အပြျောဆုံးနပေဲ့”၊ “တကယျကို စိတျပကျြမိပါတယျ”၊ “ဘယျလိုမှ မတတျနိုငျတော့ဘူး”၊ “ကြှနျတျော/ကြှနျမအတှကျ ဆုတောငျးပေးကွပါ” စတဲ့ Status တှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလို Status တှရေဲ့ လိုရငျးကတော့ ဖတျမိသူကို သဲလှနျစခပြေးပွီး “ဘာဖွဈတာလဲ၊ ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ”စတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးလာစခေငျြတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို Status မြိုးက တကယျကို စိတျပကျြစရာပါပဲ။ ပုံမှနျအလုပျအကိုငျရှိပွီး သူမြားကိစ်စ စိတျမ၀ငျစားသူတိုငျးက ဒီလို သဲလှနျစပေးတဲ့ Status တှကေို လိုကျပွီး ဘာဖွဈတာလဲ၊ ဘာလုပျပေးရမလဲ လိုကျစပျစုနမှော မဟုတျပါဘူး။
၂။ ဟနျလုပျကွှားလုံးထုတျသညျ့ Status မြား
“i Phone7နဲ့ Samsung Galaxy S 8 ဘယျဟာပိုကောငျးလဲ ပွောကွပါဦး။ ရှေးရခကျနလေို့” ဆိုတဲ့ Status မြိုးကို စဉျးစားကွညျ့ပါ။ တကယျရှေးရခကျနတောမြိုးမဟုတျတာ သခြောပါတယျ။
နောကျတဈမြိုးအနနေဲ့ “ကျောဖီဆိုငျမှာ မထငျမှတျပဲတှလေို့ စကားပွောနတော အတျောကွာသှားတယျ။ အလုပျနောကျကနြပွေီ”
ဒီလို Status မြိုးတှကေ ဖတျမိသူရဲ့ attention ကို ရယူခငျြတာ ဖွဈပါတယျ။ Status တငျတဲ့သူအနနေဲ့ သူ့ကွုံတှရေ့တဲ့ကိစ်စကို အမှတျမထငျဖွဈရပျလိုလို တငျထားပမေယျ့ Log in ၀ငျရမယျ၊ ဓာတျပုံရိုကျရမယျ၊ location check in ၀ငျတာတှေ စသဖွငျ့ အမြားကွီးပွငျဆငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဟနျလုပျ ကွှားလုံးထုတျတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနှိမျခသြလိုနဲ့ တဖကျလူတှထေကျ သာကွောငျး ဖျောပွခငျြတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၃။ Unfriend လုပျမယျ့ သတိပေးခကျြ Status မြား
Facebook ပျေါမှာ အသိမိတျဆှတေဈယောကျယောကျကို အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ Unfriend လုပျခငျြတယျဆိုရငျ လုပျသာလုပျလိုကျပါ။ ဘာ သတိပေးတဲ့ Status မှ တငျစရာမလိုပါဘူး။ တကယျလကျတှလေ့ောကမှာ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးအဖွဈက ပွတျဆဲတဲ့အခါမှာ ဘာကွညောခကျြမှ ထုတျမနပေဲ ဒီအတိုငျးပွီးသှားတတျကွတာ ဖွဈပါတယျ။ Facebook လိုမြိုး ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှော Unfriend လုပျတာကလညျး ဒီအတိုငျးပဲဖွဈသငျ့ပါတယျ။ တဈခါတညျး Unfriend မလုပျပဲ ခြိနျးခွောကျမှုတှေ လုပျနတောက အမူအကငျြ့မရှိပဲ ရိုငျးစိုငျးရာ ရောကျပါတယျ။
Previous: စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ ဦးနှောက်အကြောင်း
Next: မနက်ဖြန်အထိ စောင့်မနေပါနဲ့